Ụzọ nke anọ site na nkwụsịtụ nke ga-enyere aka kwụsị ibe weebụ
Nchịkọta weebụ bụ ike na ụzọ zuru oke iji wepu data. N'aka aka nri, ọ ga-emepụta nchịkọta na ikesa ozi. Otú ọ dị, na aka na-ezighi ezi, ọ nwere ike iduga na ntanetị ịntanetị na ịghata ikike ọgụgụ isi na asọmpi na-ezighị ezi. Ị nwere ike iji usoro ndị a iji chọpụta ma kwụsị ntanetịime weebụ nke na-emerụ gị ahụ.
1. Jiri ngwá ọrụ nyocha:
Ngwa ngwá ọrụ ga - enyere gị aka nyochaa ma usoro ntanetị weebụ ọ dị mma ma ọ bụ. Site na ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịchọpụta ma gbochie bọtịnụ nchịkọta saịtị site na nyochaa ntanetị weebụ na ozi nkụnye eji isi mee ya.
2. Jide usoro ihe siri ike:
3. Na-akpa àgwà:
4. Iji robots.txt:
Anyị na-eji robots.txt iji chebe saịtị site na ịcha bots. Otú ọ dị, ngwá ọrụ a adịghị enye nsonaazụ ọchụchọ dị ogologo. Ọ na-arụ ọrụ naanị mgbe anyị megharịrị ya site na ịpịpụta bọtịnụ ọjọọ ndị na-adịghị anabata ha.
Anyị kwesịrị iburu n'uche na nchịkọta weebụ abụghị ihe ọjọọ ma ọ bụ na-emerụ ahụ. Enwere ụfọdụ mgbe ndị nwe data nwere ike ịkọrọ ya ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee. Dị ka ọmụmaatụ, ebe dị iche iche gọọmenti na-enye ihe ọmụma maka ọha na eze. Ihe omuma atu nke nchapu ndi mmadu bu ihe ndi ozo ma obu blọọgụ dị ka ebe nrụọrụ weebụ na-agagharị agagharị, ebe a na-edepụta ụlọ oriri na nkwari, ebe ntaneti egwu, na ebe nrụọrụ weebụ Source .